Basa Pakugarisana Nevanhu - Chengdu Hemeikaineng Medical Equipment Co., Ltd.
Utano ndihwo hunokosha zvikuru
Basa rehutano hwevanhu
Nhasi, "Corporate social responsibility" yave musoro unopisa munyika. Kubva pakagadzwa kambani muna 2013, basa rehutano hwevanhu rakagara richiita basa rinokosha kune HMKN, uye izvi zvakagara zvichinyanya kunetseka nemuvambi wekambani.
Munhu wese akakosha
Basa redu kune vashandi
Ita shuwa basa / yehupenyu hwese kudzidza / mhuri uye basa / hutano kusvika pamudyandigere. MuHMKN, tinobhadhara zvakanyanya kuvanhu. Vashandi vanotiita kambani yakasimba, tinoremekedza, tinokoshesa uye tine mwoyo murefu kune mumwe nemumwe. Chete pahwaro uhwu tinogona kuwana yedu yakasarudzika yevatengi tarisiro uye kukura kwekambani.
Mupiro wezvekudzivirira denda / kudengenyeka kwepasi / mabasa erudo
HMKN inogara iine basa rakafanana rekunetsekana nenharaunda. Vakapa miriyoni imwe yezvekushandisa pakurapa panguva yeWenchuan Earthquake muna 2008, uye vakapa 500,000 yuan zvekushandisa pakurapa kweLushan Earthquake muna 2013. Nekuda kweCOVID-19, vakapa zviuru mazana mashanu zvemadhora zvekudzivirira denda kuzvipatara zviviri Tinotora chikamu mukuderedza kukanganiswa kwedenda, njodzi nezvirwere munharaunda. Nekusimudzira nzanga nekambani yedu, isu tinofanirwa kubhadhara zvakanyanya kune hutano hwevanhu uye zvirinani kutakura mutoro uyu.